Fikarohana – “Microcebus jonahi”: Karazam-barika kely vaovao | NewsMada
Saika isan-taona, ahitana karazam-barika na gidro vaovao eto Madagasikara vokatry ny fikarohana hitan’ireo ma­nampahaizana haivarika. Lo­hany amin’ny fikarohana ny profesora Ratsimbazafy Jonah ao amin’ny Gerp* miaraka amin’ny mpikaroka vahiny hafa.
Ity volana jolay 2020 ity no nahafantarana fa misy varika kely vaovao hita sy fantatra vokatry ny fikarohana nandritra 10 taona mahery eo amin’
ireo mpikaroka haivarika iraisam-pirenena. Ao amin’ny valan-javaboahary Mananara Avaratra ny ahitana azy, “Mi­crocebus jonahi” (Microcebe de Jonah). Tafakatra 25 izao ny karazana Microcebe misy eto Madagasikara. Azo antoka fa mbola misy harena voajanahary miafina tsy fantatra, anatin’ny ala izay efa 10% sisa tavela izay ahitana karazana gidro 112.
Vaovao tsara mampiray ny mpikaroka iraisam-pirenena ity varika kely vao hita ity. 14 izy ireo, avy amina firenena samihafa (i Etazonia, i Ale­mai­na, i Frantsa, i Portugal, ary i Madagasikara) nanoratra ny voka-pikarohana
Vahaolana iray ny fahazoan’ny rehetra mampiasa angovo mora vidy, hampihena na hampitsahatra ny fahapotehan’ny ala. Antony iray mahasarika ny mpizahatany hitsidika an’i Madagasikara ny hijery varika amina faritra natoraly fonenany. Fanoitra iray lehibe ho an’ny toekarena eto ny fikajiana ny tontolo iainana.
Gerp* : Groupe d’étude et de recherche sur les primates de Madagascar
Fa maninona no hoe Microcebus jonahi ?
Pr Ratsimbazafy Jonah, mpikaroka malagasy fantatr’izao tontolo izao amin’ny asa fikarohana sy ny fiarovana ny varika. Izy no mitantana ny Gerp eto Madagasikara. Noho izany asa vitany izany, niray feo ireo mpikaroka iraisam-pirenena nisafidy ny anaran’io varika kely io hitondra ny anarany. Izy rahateo ny avy aty Afrika voafidy voalohany ho filohan’ny International Primatological Society, mandritra ny efatra taona, raha toa ka ny Amerikanina sy ny Japoney hatrany ny nitarika izany teo aloha.